कालोधन विदेश थुपार्ने विनु श्रेष्ठ को हुन् ? नेपालका बैंक डुबाएर विदेशमा डेढ अर्ब | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
कालोधन विदेश थुपार्ने विनु श्रेष्ठ को हुन् ? नेपालका बैंक डुबाएर विदेशमा डेढ अर्ब
प्रकाशित मिति ७ माघ २०७५, सोमबार १६:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे) ले उपलब्ध गराएको विवरण र खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपाल (खोपके) ले गरेको थप अनुसन्धानले ५५ जना नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको फेला परेको छ । नेपाललीक्स २०१९ मा उल्लेखित विदेशमा कालोधन थुपार्ने ५५ जनामध्ये विनु श्रेष्ठ पनि हुन् ।
उनी नेपालमा थुप्रै वित्तीय अपराधमा संलग्न एनबी ग्रुपका संचालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठकी श्रीमती रहेको खुलेको छ । आईसीआईजेका अनुसार, उनले पनि सन् २००५ मा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्मा वेलउड एकज लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेकी छन् । उक्त कम्पनीको नाममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति देखिएको छ । ललितपुर ठैबकी विनु श्रेष्ठ आइसीटीसीका दिनेशलाल श्रेष्ठकी बहिनी हुन् ।सन् २०१७ को प्याराडाइज पेपर्सले सार्वजनिक गरेको सूचीमा पनि बिनु श्रेष्ठको नाम थियो ।
एनबी ग्रुपको नेपालको वित्तीय अपराध गर्नेमा पर्दछ । नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक डुबाउने एनवी ग्रुपका जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र उनको परिवार हो । लक्ष्मीबहादुरहरुले बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको छ । तर त्यो ग्रुपले बैंक ठगी गरी डेढ अर्ब सम्पत्ति विदेशमा लगेको खुलेको छ । त्यसका अलावा हरिसिद्धि ईटा टायल कारखाना सरकारसँग कौडीको मूल्यमा किनेर उद्योग संचालन नगरी जग्गा बिक्री गरी अर्को अपराध पनि एनवी ग्रुपले गरेको छ । हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना निजीकरण गर्दा उक्त जग्गा उद्योग प्रयोजनबाहेक अरुमा प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ । उद्योगका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा त्यसमा प्रयोग नभए स्थानीयलाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । जुन माग स्थानीयले गर्दैआएका छन् ।
लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बिनु श्रेष्ठ आफ्नी पत्नी भएको स्वीकार गरे । नेपालका बैंक डुबाएर रकम विदेशमा राखेकोबारेमा उनले भने–विदेशमा पैसा राखिएको होइन । नेपाललिक्समा नाम आएकी विनु श्रेष्ठको नाममा डेढ अर्ब रुपैयाँ ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा राखिएकोबारेमा उनले भने– ‘मिटिङमा छु, पछि फोन गर्छु ।’
काठमाडाैं । उन्नाइसौं शताब्दीमा आविष्कार भएको रेल र बीसौं शताब्दीको आविष्कार हवाईजहाजका भरमा चलिरहेको दुनियाँलाई एक्काइसौं शताब्दीले त्योभन्दा तीव्र…
काठमाडाैं । प्रदेशसभा २ को सचिवालयले प्रदेश सांसदलाई ल्यापटप दिने भएको छ ।
१ सय ७ जना सासदलाई सवा लाख…
बढ्दो वायु प्रदूषणबाट स्वास्थ्यजन्य समस्या जटिल बन्दै
ललितपुर। परम्परागत इन्धनको प्रयोग, सवारी साधनको चाप, जथाभावी कृषि अवशेष जलाउने र निर्माण सामग्री एवं उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने धुलो…
रानीपोखरी पुनर्निर्माणः प्राविधिक क्षमता परीक्षण हुँदै
काठमाडाैं । रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक क्षमता परीक्षणको काम भइरहेको छ । तेस्रोपटक छोटो समयको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा…
कानूनमन्त्रीमा दुई जनाको नाम, भानुभक्त ढकालकाे बलियाे सम्भावना
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएसँगै अब उनको स्थानमा नयाँ मन्त्री…
कास्की । प्रदेश नम्बर ४ मा आईतबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आफ्नाे कार्यभार सम्हालेको …